Indlela yokuvula kunye nokufaka iifayile ze-APK kwi-PC | I-Androidsis
UManuel Ramirez | 07/04/2021 16:50 | APK, Ukusetyenziswa kwe-Android, Ukukopela kwe-Android
Ngethamsanqa sinokubakho vula kwaye ufake iifayile ze-APK kwiPC yethu ukuze sikwazi ukonwabela iiapps zethu esizithandayo kunye nemidlalo. Ngale ndlela sinokuhamba sisuke kwiscreen esincinci siye kwesinkulu njenge-PC yethu okanye ilaptop enye engalunganga nayo.
Ke ngoko siya ku fundisa ezinye zeendlela esinazo ukutsala iPC yethu ngamaxesha amaninzi kwaye siyonwabele loo midlalo kwiscreen esikhudlwana. Owu, kwaye ayizukuba nzima njengokuba inokuba njalo. Sihamba ngeendlela ezininzi, ke lumka.
2 Uyifaka njani i-APK ene-Bluestacks
3 Ukuqhagamshela kwiWindows ngeMicrosoft yakho kunye nefowuni yeSamsung
4 Vula ii-APKs nge Android Studio
5 Qalisa iifayile ze-APK kwiPC eneChannel
Nguye Olona khetho lufanelekileyo esinalo ngoku ngenxa yokulula kunye nokulula yeyiphi ukuyifaka. Liqonga ngokwalo esivumela ukuba sivule kwaye sifake iifayile ze-APK ukuze kuthi zisoloko zinokufikelela kwezi zicelo kunye nemidlalo yevidiyo.
Ngokwenyani into eyenziwa yiBluestacks yenza ufakelo lwe-Android ngasemva kwemiboniso ukuze eziapps kunye nemidlalo yevidiyo ikwazi ukumiliselwa. Ingathi sisungule i-Android Studio, iqonga lophuhliso lukaGoogle, kodwa ngendlela entle nelula ngaphandle kokungena kwiifolda, nangaphezulu.
Eyona nto ibalaseleyo kuko konke yile Ukufakwa kwe-Android okusebenza ngasemva, Yongeza inyani yokuba ineVenkile yokudlala efakelweyo ukuze siyitsale kwaye ke sifikelele kuzo zonke ii -apps kunye nemidlalo esiyithengileyo. Ewe sinako ukufaka ii-APK kule modeli njengoko siza kukubonisa apha ngezantsi.
Enyanisweni, Siza kuba neethebhu ezimbini phezulu ezisisa kwiziko leapps kunye nemidlalo, kwaye eyesibini yeyokuba iya kuba yeyiphi imidlalo esiyifakileyo kwiiPC zethu.oko kukuthi, kufuneka sisoloko sifikelela kwiiBluestacks ukuzisungula kwaye sikwazi ukudlala uMario Kart Tour.
Ngaba oku mhlawumbi Olona loncedo lukhulu kwii-Bluestacks, kuba ziya kusithintela ekuphazamiseni ii-APKs, ukuze sikwazi ukukhangela le APK ikhutshelweyo kwaye sinqande ukuya kwezinye iindlela ezinzima zokwenza, ezinjenge Android Studio.
Oko kwathethi, kufanelekile ukuba kuchazwe ukuba ukuqala kwesicelo kwiPC kuthetha ukuba Sijongene nesoftware engakhange ilungiselelwe kakhulu kwezi zikrini ubukhulu obukhulu njengabalawuli okanye abalawuli, njengempuku.
Okokugqibela, kwaye nangona IBluestack ibonakala ngathi isinika amava afanelekileyo, inyani yokuba iiapps zihlaziyiwe zingakhokelela kwiimpazamo kule ndawo yokulinganisa ye-Android, ke nikela ingqalelo koku kuba inokukukhokelela kwisitalato sobukrakra.
Unga khetha ukuyikhuphela simahla njengokuya kwimodeli yobhaliso.
Bluestacks - Ukukhuphela
Uyifaka njani i-APK ene-Bluestacks
Sifuna ukushiya eli candelo ngokwalo, kwaye kunjalo I-Bluestacks ikwavumela ukufakwa kwee-APK esizikhuphelileyo ngaphambili kwiziza ezinjenge apkmirror (enye yezona zinto zithembekileyo kwaye sicebisa xa ufuna ukufikelela kwi-APK ethile).
Oko kuthethiweyo, kulula kakhulu:
Sazisa i-Bluestacks kwiPC yethu
Ngaphakathi yiya kwithebhu "Usetyenziso lwam"
Ukusuka kwikona yefestile Sijonge ukhetho «Faka i-APK»
Sikhangela ifayile ebanjelwe kwiPC yethu kwaye siyifaka.
Ukuqhagamshela kwiWindows ngeMicrosoft yakho kunye nefowuni yeSamsung
Isamsung nge "Qhagamshela kwiWindows" kunye noncedo olubalulekileyo lweMicrosoft, ikwazile ukumilisela iiapps esizifakileyo kwifowuni yethu ephathekayo kwiPC okanye kwilaptop yethu. Oko kukuthi, nayiphi na i-APK esiyifaka ngesandla kwiselfowuni yethu ye-Samsung inokuqalwa kwidesktop yePC yethu.
Sele sinayo uphawule kwiimpapasho ezahlukeneyo zonke izibonelelo zonxibelelwano lweWindows kunye neFowuni yakho usetyenziso oluvela kwiMicrosoft. Kwaye izibonelelo zininzi, kuba sinokufumana iifowuni okanye sikhawuleze ukudlulisa iifayile xa sidibanise izixhobo zethu ezimbini okanye Nditsho nebhodi eqhotyoshwayo yokukopa kunye nokuncamathisela usetyenziso ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Ngapha koko sinayo kwisitishi sethu sevidiyo ye-Androidsis isifundo ikufundisa ntoni indlela yokuvula iiapps onazo kwiselfowuni yakho kwiPC yakho. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, kuhlaziyo lwamva nje lweapp yakho yeWindows yeWindows, ungavula iiapps ezininzi ngaxeshanye kwaye uzicofe kwibar yomsebenzi yeWindows.
Sijongene nenye yeendlela ezilungileyo, nangona kungenjalo ngaphambi kokuba sikwazi ukuvula ii-APKs kwiWindowsEndaweni yoko, kufuneka siye kwiselfowuni yethu, khuphela i-apk kwaye uyifake ukuze uyiqale kamva kwi-Windows yakho yefowuni usetyenziso.
Kodwa ukuba sijonga ukulula kunye nokulula, kwaye sineselfowuni yeSamsung kunye neWindows PC, singafaka kwaye sivule ezo APK, kunye neeapps kunye nemidlalo esiyifakileyo ukusuka kwintuthuzelo yale Windows kunye namava e-Samsung.
Xa sele nditshilo, ngokwenene siya kwenza isipili esipheleleyo, okanye inokuba yintoni ukusasazwa kwescreen esiphathwayo, nangona ifomathi inika inkangeleko yokuba silawula usetyenziso kwi-PC yethu okanye kwiLaptop.
Vula ii-APKs nge Android Studio
Siza kuya kweyona ndlela inzima kunazo zonke, kwaye Yile nto kanye umphuhlisi afuna ukuyila okanye ukutshintsha usetyenziso anokuyisebenzisa oyenzileyo nge Android Studio. Into enomdla nge Android Studio kukuba iyalingisa okanye ivelise izixhobo ezibonakalayo ngayo nayiphi na inguqulelo ye-Android. Kungenxa yokuba sinokumisela uhlobo lwakudala ukuze sikwazi ukumilisela i-APK yesicelo esixhaswe, ke ngamava apheleleyo ngokwawo.
Ezi ingangoyena manyathelo asisiseko:
Siza kufaka Android Studio: Google iwebhusayithi
Sifaka Android Studio kwiPC
Siqala isixhobo esinyanisekileyo sokulinganisa
El APK esiyikhuphelileyo siyisa kwifolda yezixhobo kulawulo lwe Studio Studio ye-Android
Sasiya kwifolda apho ikhoyo i-APK kwaye siqala lo myalelo ngamalungelo olawulo ngomyalelo weWindows:
fakela igama lefayile.apk
Phi filename.apk iya kuba ligama le-apk ukuba sifuna ukongeza kuluhlu lwezixhobo ezibonakalayo
El Eyona ngxaki inkulu kulo msebenzi kukuba iphoswa ngamanye amanqaku abalulekileyo njengeeNkonzo zikaGoogle zokuDlala, ke ngaphandle kokuba ilusetyenziso olulula kakhulu, njengoko sifuna ukumilisela i-APK yesicelo esithandwa kakhulu, kuyakubiza ukuba sixelise amava. Isitudiyo se-Android senzelwe abo bafuna ukuvavanya iiapps zabo ngaphambi kokuba bapapashe iinguqulelo zokugqibela kwiVenkile yokudlala, kodwa ngendlela yokuvavanya i-APK, ewe sinako.
Qalisa iifayile ze-APK kwiPC eneChannel
Kwaye ngoku uya kumangaliswa ukuba kukho nayiphi na indlela yokungatsali i-emulator njengale ikhankanyiweyo ukulungiselela iifayile ze-APK. Ewe ikhona kwaye kungumkhangeli we-Chrome kunye nolwandiso oluya kusivumela ukuba senze le nyathelo.
Esi sixhobo yenziwe ngabaphuhlisi besoftware yenkqubo yokusebenza ye-Android. Ke iyasivumela ngeChannel ukuba silingise ii-APKs nakwezinye iinkqubo zokusebenza ezinje ngeMacOS okoko nje sinesikhangeli esifanayo esifakiweyo.
ukuba Uyakwazi ukumilisela iifayile ze-APK kwiChannel Kuya kufuneka sijonge la manyathelo alandelayo:
Faka isiphequluli se-Chrome uze uye kwi-ARC Welder: Khuphela ulwandiso
Songeza i-ARC Welder kwiChannel
Khuphela i-APK kwiPC yethu okanye kwiLaptop
Sikhetha ithebhulethi okanye iselfowuni esifuna ukumilisela kuyo usetyenziso
Cofa kwiqhosha lokuvavanya ukujonga ukuba usetyenziso lusebenza kakuhle
Cofa ku «Qalisa usetyenziso»
Ngoku sinako qala i-APK kwiPC yethu kwaye ke wonwabele okanye uvavanye usetyenziso kwikhompyuter yethu. Ngoku kufuneka sikhethe kuphela ukuba yeyiphi kwezi ndlela ibonisiweyo enokuba nomdla kakhulu. Sincoma ngokuphandle iiBluestacks kuba kufuneka sikhuphele, sifake kwaye ungene kwiakhawunti yethu kaGoogle ukuqhubeka nokufakwa kwe-APK kwiVenkile yokudlala okanye i-APK ngale ndlela ichaziweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Indlela yokuvula kunye nokufaka iifayile ze-APK kwi-PC